Show All Most Popular ဒေါင်းလန်းကြီးမြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်စာ ကြက်သားဟင်းလျာများ ဆိတ်သားဟင်းချက်များ ငါးဟင်းချက်များ ပုဇွန်ဟင်း အသားကြော်များ ထမင်းနှင့်ပါတ်သက်သောအသုပ်မျိုးစုံ အသုပ်များ Fried Fresh Vegetables Coffee သဘာဝသစ်သီးစစ်စစ်ဖျော်ရည်များ
ကြက်သားဟင်းလျာများ
ဆိတ်သားဟင်းချက်များ
ငါးဟင်းချက်များ
အသားကြော်များ
သဘာဝသစ်သီးစစ်စစ်ဖျော်ရည်များ
Corner of 52 Street x 42 C Street, Mandalay, MM Mahar Aungmyay
1. Daung Lann Gyi (ဒေါင်းလန်းကြီးထမင်းသုပ်)
ငါးဖယ်လဘက်ငပိရည်သံပုရာသီး ငြုပ်သီးနှင့်ချဉ်ငံစပ် အသုပ်ဖြစ်ပါသည်
2. ဗမာကြက်ကြော်
11. Dry Mutton with Tomato Curry (ဆိတ်သားခြောက်ချက်)
7. Fried Catfish (ငါးခူအစပ်ကြော်)
ငါးခူကြော်ကို ငြုပ်သီးအနှစ်နဲ့ပြန်ကြော်ထားတာပါ
2. ပုဇွန်ကျောဆီပြန်
ကျော့ပုဇွန်လေးတွေကိုအနှစ်နဲ့ဆီပြန်ချက်ထားတာပါ
3. Fried Featherback (ငါးဖယ်ကြော်) (၁၂ချောင်းပါ)
ဟင်းချက်နှစ်မျိုး+အကြော်နှစ်မျိုး+အရံဟင်းချက်သုံးမျိုး+ဆေးဘတ်ဝင်ကျန်းမာရေးအသုပ်+ဟင်းရည်တစ်မျိူး+ငပိရည်အတို့အမြှပ်အစုံ
ဒေါင်းလန်းကြီးမြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်စာအသေး (၁)ပွဲ (၂-၃)ဦး
ဟင်းချက်နှစ်မျိုး+အသားကြော်တစ်မျိုး+အရံဟင်းချက်သုံးမျိုး+ဆေးဘတ်ဝင်ကျန်းမာရေးအသုပ်နှစ်မျိုး+ဟင်းရည်တစ်မျိုး+ငပိရည်အတို့အမြှပ်အစုံတစ်ပွဲ
ဟင်းပွဲတိုင်းတွင် အရံဟင်းသုံးမျိုး ဟင်းရည်တစ်မျိုး ငပိရည်အတို့အမြှပ်စုံပါဝင်သည်
ဗမာကြက်ကိုဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီ၊ဆီသတ်ပြီးအာလူးလေးရောမဆလာလေးနည်းနည်းအုပ်ချက်ထားတာပါ
14. Fisherman Curry (ကိုတံငါဟင်း)
20. ငါးဘတ်မွှေချက်
ငါးဘတ်ကိုစပါးလင်ခံပြုတ်ထားပြီးမှခရမ်းချဉ်အနှစ်နဲ့မွှေချက်ထားတာပါ
6. ဆိတ်မွကြော်
9. Baked Sundried Banded Snakehead Fish (ငါးရံ့ခြောက် ဖုတ် )
3. Pyi Rice Salad ( ပြည်ထမင်းသုပ်)
တို့ဖူး ကြာဇံ အာလူး ကြက်သွန်နီ နံနံပင်နှင့်သုပ်ပါသည်
ပုန်းရည်ကြီး ပုဇွန်ခြောက်မှုံ့ ငြုပ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်နီနှင့်သုပ်ပါသည်
6. Rice Mix with Fish Paste Sauce (ငပိရည်ထမင်း)
ငပိရည် ပုဇွန်ခြောက်မှုံ့ ငြုပ်သီးမှုံ့ သံပုရာသီး နှင့်သုပ်ပါသည်
7. Rice Mix with Tea Leaves (လဘက်ထမင်း)
လဘက် ပဲကြော်ပုဇွန်ခြောက်မှုံ့ ချဉ်ငံစပ်သုပ်ပါသည်
5. Century Egg Salad (ဆေးဘဲဥသုပ်)
6. ကျောက်ပွင့်သုပ်
14. ပဲကြော်သုပ်
16. Tomato Salad (ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်)
18. ကြောင်လျှာ
30. ဒညင်းသီး (၁ပွဲ)
Fried Choyate Leaf (ဂေါ်ရခါးညွန့်ကြော်)
Fried Sprin-Bud (ဂျူးဖူးကြော်)
Fried Kailan (ကိုက်လန်ကြော်)
Fried Watercress (ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်)
Fried Mushroom And Watercress (မှိုကန်ဇွန်း)
Fried Spanish (ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်)
ထန်းသီးဆံအစစ်ကို နို့ဆီနို့စိမ်း ကျောက်ကျောမဲ နှင့်ဖျော်ထားပါသည် ရာသီပေါ်ချိန်ပဲရပါသည်
5. သရက်သီးဖျော်ရည်
6. နဂါးမောက်သီးဖျော်ရည်
11. သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်
14. လိမ္မော်ဖျော်ရည်
15. ကမ္ဗလာဖျော်ရည်
17. Pineapple Juice (နာနတ်ဖျော်ရည်)
22. သီးစုံဖျော်ရည်
24. ငှက်ပျော
26. မဲမဲကြီးကျောက်ကျော